केराको बोक्राको पनि यति महत्वपूर्ण छ फाइदा, जान्नुहोस् आफै छक्क पर्नुहुनेछ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/केराको बोक्राको पनि यति महत्वपूर्ण छ फाइदा, जान्नुहोस् आफै छक्क पर्नुहुनेछ
काठमाडौ । दुई महिना अघि मा १६ वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी एक किशोरीको रह,स्यम नि,धन भएको छ । झापाकी स्थानिय निमा लिम्बुको १६ वर्षकै उमेरमा नि,धन भएको हो ।
उनले दे,ह त्या,ग गरेको श्रीमानका परिवारका सदस्यले बताएका छन् । घ,टना हुँदा आफुहरुले थाहा नपाएको परिवारका सदस्यले बताएका छन् । वर्षात लिम्बु (श्रीमान) र सासुले किन यस्तो निर्णय गरिन् भन्ने आफुहरुलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।
तर निमाका परिवारका सदस्यले भने घ,टना रह,स्यमयी भएको बताएका छन् । घट,नाको स,त्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
निमाको दिदीले हुँदै भनिन्, उसले दे,ह त्या,ग गरेको भएपनि त्यसको के कारण थियो भन्ने कुराको खुलासा हुनुपर्छ । आफ्नो जिवन नै त्या’ग गर्ने निर्णय त उसले त्यसै गरीन होला ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
निमा कात्तिक ३० गते उनी घरवाट निस्केकी थिइन् । तर उनी कहाँ छन् भन्ने कुरा परिवारले जानकारी पाएका थिएनन् । केही दिन पछि उनीहरुले वर्षात लिम्बुसंग रहेको जानकारी पाएको बताएका छन् । युवकको उमेर करिब २४ वर्षको रहेको उनीहरुले बताएका छन् । निमा घरवाट हिडेपछि मात्र वर्षातसंग प्रेम रहेको थाहा पाएको बताए ।
घरवाट हिडेको एक महिना पछि मात्र निमा वर्षातसंग विवाह गरेको रहेछ भन्ने थाहा पाएको बताए । आफै विवाह गरेर गए पछि छोरीसंग कुनै स म्प र्क नभएको उनीहरुले बताए । तर एकै पटक उसको नि,धन भएको मात्र आफुहरुले थाहा पाएको बताए ।
महिनावरी हुँदा पेट देख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटराका पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
कपाल फुल्यो ? फुलेको कपलालाई कालो बनाउने ४ तरिका
घरमै बसी पेटको बोसो घटाउने मन छ ? उसोभए यी काम गर्नुस्
यी राशिका मानिस हुन्छन् विश्वसनीय, दिँदैनन् धोका !